May | 2009 | အံ့ဘုန်းမြတ်
အသက်ငွေ့ငွေ့သာ ရှုရှိုက်ခွင့်ရနေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့ အိပ်မက်တွေ
Posted by ahuntphonemyat ⋅ May 31, 2009 ⋅ 1 Comment
အံ့ဘုန်းမြတ် (2008.DEC 16)
အောက်တိုဘာလရဲ့ တစ်စုံတစ်ခုသော ညနေခင်းမှာ ကျွန်တော် အဲ့ဒီအရာကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ အင်းယားကန်ဘောင်ပေါ်မှာ၊ Moon Bakery ထဲမှာ လမ်းဘေး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးထဲမှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လူစည်ကားရာလမ်းတွပေါ်မှာ ထူးထူးခြားခြားလေးပဲ အလွန်တရာ သိမ်မွေ့လွန်း လှတယ်။ အဲ့ဒီညနေခင်းတွေထဲမှာ ရှန်ပူရနံလေးတွေပါတယ်… ဂျင်းဘောင်းဘီလေးတစ်ထည်ပါတယ်။ ဘစ်ကားမှတ်တိုင်လေး တစ်ခုပါတယ်။ ညာဘက်လက်ဖ၀ါးလေး တစ်ဖက်က ကျွန်တော့် ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကို မျှော်လင့်ချက် အမြှင်တန်းသေး သေးနဲ့ ဆုတ်ကိုင်လို့ပေါ့….။
ကြည်အေးရဲ့ဝတ္တုစာအုပ်အချို့အကြောင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ အာရုံခံစားမှုတွေအကြောင်း… အမြှုပ် ကလေးတွေ တစီစီဝှေ့တက်နေတဲ့ ရွှေအိုရောင် ဖန်ခွပ်ကလေးကို ရီဝေေ၀ကြည့်ရင်း ကျွန်တော် စကားတွေပြော ခဲ့ဘူးတယ်…။ အခိုက်အတန့်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ မိနစ်ပိုင်း၊ နာရီပိုင်းလောက်ပဲ ချစ်ခွင့်ရှိခဲ့တဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် လွန်ကဲလွန်းလှတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်လိုက်မိတယ်…။ ဒီလိုနဲ့ အစဉ်သင့်စောင့်နေတဲ့ ကွက်လပ်တစ်ခုထဲ ကျွန်တော်ခုန်ချပစ်လိုက်တယ်….။
ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းတယ်ဆိုတာ… မုန်းတဲ့သူတွေအတွက်ပဲလေ။ ချစ်ကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ကျယ်နေဦးမှာပါပဲ။ တစ်ယောက် မျက်နှာကို တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ခွဲခွာခဲ့ကြတဲ့ ညချမ်းက အဖြူရောင် အငှားကားလေးတစ်ခုထဲမှာဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် မှတ်မိနေ သေးရဲ့…..။
ကျွန်တော်… ဘ၀ဆုံးနေတဲ့ ကိုယ်တိုင်ခုန်ချခဲ့တဲ့ ကွက်လပ်တစ်ခုထဲကနေ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့အရာကို ရူးသွပ်မိုက်မဲစွာနဲ့ မွေးဖွားသန့်စင်ပစ် လိုက်မိတယ်။ ဒါဟာ အိမ်မက်တွေချစ်တက်တဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူအတွက် နှစ်သိမ့်စကားဆိုတဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က အိမ်မက်တွေထဲမှာပဲ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသူမို့လို့ပါ။ အခုတော့… အလွမ်းတွေ ပန်းအဖြစ်တောင် မဖူးပွင့်နိုင်တော့ဘူး။
ဒီနေရာမှာ…ဆွယ်တော်ပန်းတွေ ပွင့်နေကြပြီလေ….။ တစ်ချိန်ကတော့ သူနဲ့ကျွန်တော် ပျဉ်းမပန်းတွေအကြောင်း တဖွဲ့တနွဲ့ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြဘူးတယ်။ ငှက်ကလေးတွေ အော်မြည်နေကြတာကိုပဲ နှစ်ယောက်သားအတူရယ်နိုင် အောင်ကြိုးစားခဲ့ဘူးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခိုက်အတန့်လေးပါပဲ… အဲ့ဒီအချိန်က ရယ်မောပျော်ရွှင်မှုတွေထဲမှာ အနိဌာရုံခံစားချက်တွေ ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာ သူရော ကျွန်တော်ရော… သတိမမူမိခဲ့ကြဘူးလေ။ ဒါဟာ အချစ်ရဲ့ မာယာတွေပဲလားလို့ ကျွန်တော်သံသယရှိလာမိတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ…။ အားလုံးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရပေမယ့် သတိရခြင်းတွေကိုတော့ ကျွန်တော့်ကို သူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာကိုပဲ ကျွန်တော်ကျေးဇူး တင်နေမိတယ်လေ။ ချင်မိုင်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာလျှောက်သွားရင်း အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ်ကသူ့ကို သတိရမိတယ်။ ဆောင်းညချမ်းတွေ တိုင်မှာသူနွေးထွေးစွာ ဆုတ်ကိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းက အေးစက်လိုနေလေရဲ့…. ဒီလိုနဲ့ပဲ… အသက်ငွေ့ငွေ့သာ ရှုရှိုက်ခွင့်ရနေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့ အိပ်မက်တွေ ဆက်မက်နေမယ်ဆိုတာ ပြောပြလိုက်ကြပါဗျာ။
Posted by ahuntphonemyat ⋅ May 14, 2009 ⋅3Comments
မန္တလေးအလွမ်းပြေ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်...
မီးရှူးတိုင်ဟာ ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာ ငြိမ်းမသွားဖို့ပဲလိုတယ်
Posted by ahuntphonemyat ⋅ May 8, 2009 ⋅4Comments
အံ့ဘုန်းမြတ် (2009 MAY 8)
မြို့ရိုးတခြမ်းမရှိတော့တဲ့ အဲ့ဒီမြို့ဟောင်းလေမှာ တစ်ချိန်တုန်းက သွေသံတွေ ရွှဲရွှဲဆိုခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတစ်ချို့ရဲ့ စီးချင်းထိုးသံတွေဟာ အခုအချိန်ထိ ပျံလွှင့်နေတုန်းပဲလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ကာယခွန်အားကို ဘုရားလိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ အဲ့ဒီလိုခေတ်တုန်းကတော့ သူရဲကောင်းဆိုတာ အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုတ်နေခဲ့ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ စစ်ပွဲဆိုတာ လူငယ်သေကြေပြီး လူကြီးတွေ စကားပြောရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရတယ်….
ကာယခွန်အားကို စိုက်ထုတ်… ရဲစွမ်းသတိကို အရင်းအနှီးပြုပြီး သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့ ဘယ်လူငယ်တွေရဲ့နာမည်မှ ကျောက်စာအတင်မခံခဲ့ရတာကတော့ အမှန်တရားတစ်ခုပဲ… ဒါကို သမိုင်းလို့ ခက်ညံ့ညံ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဖွင့်ဆိုကြပြန်တော့ သမိုင်းဆိုတာ သွေးနဲ့ရေးတာမျိုးမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်စရာကောင်းလာလေရဲ့….. ဒီလိုနဲ့ အနာဂတ်ပါဆိုတဲ့ လူငယ်တွေ ဘယ်ခေတ်အထိ သေဆုံးပေးနေကြရဦးမှာလဲ….
အဲ့ဒီခေတ်က လူငယ်တွေရဲ့ ဆောင်ဓားတွေမှာ သွေးအလိမ့်လိမ့်ပေကြံနေခဲ့ကြမှာ သေခြာနေပေမယ့် ပြတိုက်ထဲမှာ ငြိမ်သက် စွာလဲလျှောင်းနေတဲ့ ဂုဏ်ပြုခံ ပြဇာတ်ဆန်တဲ့ ဆောင်ဓားတွေကိုတော့ သူတို့ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာ ကောင်းလှပေရဲ့….
စစ်မက်ဆိုတာ အေးချမ်းသာယာနေတဲ့ တောအုပ်တစ်ခုတည်းမှာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင်သလို ရွှေအတိချထားတဲ့ စည်းစိမ်ခံ နန်းဆောင်တွေထဲမှာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်…. အဓိကကတော့ သူရဲကောင်းလို့ ကျောက်စာအတင်မခံရနိုင်မှန်း သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ… အနာဂတ်ရဲ့လူငယ်တွေဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပန်းခြံတွေကြားမှာ လမ်းလျှောက်ရင်း စကားပြော နိုင်ကြစေဖို့ ဆောင်ဓားတွေကိုဆွဲထုတ် စည်းစိမ်ခံ နန်းဆောင်တွေကို မီးရှို့ပစ်ဖို့ပဲလိုတယ်…
သမိုင်းကို သမိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်… သူတို့ရဲ့ဆောင်ဓားတွေဟာ သူတို့အနာဂတ်အတွက်ပဲဖြစ်နေရင် ဘယ်အသက်ကိုမှ သူတို့ဖက်နဲ့ထုပ်နေမှာ မဟုတ်တော့တာ သေခြာတယ်… ဒီလိုနဲ့ ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ သူတို့မျက်နှာကို နှောင်းလူငယ်တွေ မှင်ကြောင်ထိုးကြလိမ့်မယ်… အသွေးအသားနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ကြရတဲ့ သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကို သူတို့ဟာသူတို့ ပြဌာန်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်… ဒါဟာ သမိုင်းပါလို့ ရဲရဲဝန့်ဝန့်ကြွေးကြော် နေကြပါလိမ့်မယ်…. နောက်နောင် ဘယ်သောအခါမျိုးမျှာမှ စစ်ပွဲတွေ ထပ်ဖြစ်မလာ နိုင်စေဖို့အတွက်ပေါ့…. စစ်ပွဲဆိုတာ ပျက်ဆီဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ အနိဌာရုံတွေရဲ့ ဘဏ်ဌာတိုက်လို့ဆိုရပေမယ့် သမိုင်းတလျှောက်မှာ တော့ စစ်ပွဲတွေပြီးမှ ပိုတိုးတက်လာတာကြည့်ရယ်ပါ… အဲ့ဒီတိုးတက်မှုဆိုတာတွေထဲမှာလည်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာတွေက အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် ကျန်ရှိနေခဲ့ဦးမှာပဲလေ…။ ဒီလိုနဲ့ မျိုးဆက်တစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းသယ်လာတဲ့ မီးရှူးတိုင်ဟာ ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာ ငြိမ်းမသွားဖို့ပဲလိုတယ်…
ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို တင်ပြထားတာပါ။ အပေါ်က ဆောင်းပါးနဲ့တော့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ မသိဘူးပေါ့
Posted by ahuntphonemyat ⋅ May 7, 2009 ⋅ 1 Comment
(လှိုင်းသစ်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၀၉)
Posted by ahuntphonemyat ⋅ May 7, 2009 ⋅ Leaveacomment
ကျွန်ုပ်မှာသာ အခွင့်အရေးရှိမည်ဆိုလျှင် မဟာစကြာဝဠာတံတိုင်းပေါ်မှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးချင်ပါသည်။ အာဒံကို အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲက သစ်သီးအား မစားဖြစ်အောင်တားမြစ်ချင်ပါသည်။ မောင်ချောနွယ်ကို အိုင်ယာလန်ပို့ချင်ပါသည်။ ဟစ်တလာကို ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်နှင့် အလဲအထပ် ရိုက်ချင်ပါသည်။ ဖြစ်တည်မှုပဓန၀ါဒကို ငရဲမီးစားကြည့်ချင်ပါသည်။ ဟီရိုရှိးမားမြို့ထဲက သြဂုတ် (၆) ရက်နေ့ကို ထာဝရနုတ်ယူထားချင်ပါသည်။ အီရက်သို့သွားကာ ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းတန် ဆက်ဒမ်ဟူစိန်အား ရှာဖွေချင်ပါသည်။ မိုက်ယ်အိန်ဂျလို၏ လက်များကို ကျောက်တုံးဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းချင်ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီကို ခြောက်မူးတစ်ပဲနှင့် ၀ယ်လိုပါသည်။ (ပြန်အမ်းငွေမယူပါ) လူတိုင်းတွင် အခွင့်အရေး ရှိမည်ဆိုပါက အခွင့်အရေးကို အခွင့်အရေးဟု အမည်ပေးကြလိမ့်မည် မထင်ပါ။ အမည်ဆိုသည်မှာ….
ဆိုကရေးတီးသောက်ခဲ့သော အဆိပ်ခွက်၏အမည်မှာ အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ပြီး စကြ၀ဠာကို အမဲလိုက်ခဲ့သော သူ၏အမည်မှာ စတီပင်ဟော့ကင်းဖြစ်ပါသည်။ မြေချစ်သူ၏ လျှာပေါ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော စက်ရုံအမည်မှာ “၀ိုင်” ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးပိုင် ကျွန်ပိုင်ခေတ်က ကျောက်ဖြစ်သွားသော ချွေးစက်များ၏အမည်မှာ ပိရမစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာမြေကြီးက လက်ခံထားသော ပရောမီးသီးယပ်စ်၏ ခိုးရာပါပစည်းအမည်မှာ မီးဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၆ ခု၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ဘုရားသခင်လက်မှ လွတ်ကျတော်မူခဲ့သော ပစ္စည်း၏ အမည်မှာ သစ္စာနီဖြစ်ပါသည်။ (ကံအားလျော်စွာ ကွဲရှသွားသည်) ကျွန်ုပ်ကြိုက်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်မရခဲ့သော မိန်းမများ၏အမည်မှာ ဂျိမ်းဖွန်ဒါ၊ ကက်သရင်း ဒဲန်ညူ၊ နမ်စီကွမ်၊ ရှမီလာတဂိုးနှင့် ခင်မေအောင်တို့ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် အမည်နာမများမှာ ပညတ်များသာဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် အမှန်တရား၊ သိပ္ပံပညာ၊ လူ၊ စနစ်၊ ရမ္မက်၊ သေခြင်းတရားနှင့် အရာအားလုံးမှာ ပညတ်များသာဖြစ်သည်။ ပညတ်ဆိုသည်မှာ မသေချာသော အရာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တွင် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ရှိသည်မှာသေချာပါသည်။ သို့သော ထိုဝတ္ထုထဲတွင် ဇာတ်လမ်းပါရန်မှာ မသေချာပါ။ သည်ပန်းသည် ရနံ့မွှေးသည်မှာ သေချာပါသည်။ သို့သော် သည်ပန်းကို နှင်းဆီဟု ခေါ်ကြောင်း မသေချာ။ ကလီယိုပက် ထရာကိုကိုက်သည့် ပန်းသီးခြင်းထဲမှ မြွေသည် အဆိပ်ရှိကြောင်း သေချာပါသည်။ သို့သော် ထိုမြွေသည် မြွေဟောက်ဖြစ် ကြောင်း မသေချာ။ စာရေးဆရာညိုသစ်တွင် အိမ်ထောင်မရှိကြောင်း သေချာပါသည်။ သို့သော် လူပျိုဖြစ်ကြောင်း မသေချာ။ သည်အရာမှာ ရွှေတစ်ကျပ်သားဖြစ်ကြောင်း သေချာသည်။ သို့သော် ရွှေစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း မသေချာ။
မနက်ဖြန် နေထွက်မည်လား မသေချာ။ မသေချာခြင်းမှာ နောက်ဆုံးပေါ် သိပ္ပံနည်းကျ အယူအဆဖြစ်ပါသည်။ ရူပဗေဒသိပ္ပံနယ်တွင် ထင်ရှားလှသော ဟိုင်ဇင်ဘတ်ခ်၏ မသေချာမှုနိယာမ (Uncertainty Principle) ကို သင်ကြားဖူးပါသလား။ လူမှုရေးသိပ္ပံနယ်တွင် သတင်းနည်းပညာတော်လှန် ရေးက မွေးထုတ်လိုက်ကာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ ၀ိသေသတစ်ခုအဖြစ် Uncertainty မရေရာမှုသီအိုရီကို ရောဘတ်ဆင်မျူရယ်ဆင်လို ပညာရှင်တွေ ကိုင်စွဲအသုံးပြုနေကြသည်ကို သင်ကြားဖူးပါသလား။ အနုပညာနယ်ပယ်တွင် ပို့စ်မော်ဒန်တို့၏ အဓိကမဏ္ဍိုင်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ၀ုဖ်ဂန်အဇ္ဇာ WOLFGANGISER ၏ ရှိမှုမရေရာခြင်း သဘောတရားခေါ် ONTOLOGICAL UNICERTAINTY ကို သင်ကြားဖူးပါသလား။ သင်ကြားဖူးသည်မှာ သေချာပါသလော။ သေချာသည်မှာ မသေချာပါ။ (မှတ်ချက် သည်ဝတ္ထုကို ဟွန်းမဲ့ဇုံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။)
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာသစ္စာနီရေးသားခဲ့သော “မနက်ဖြန်ထွက်မယ့်နေ” အက်ဆေးဆောင်းပါးကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် “ရုပ်ရှင်အမြုတေ” မဂ္ဂဇင်းမှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြပြီး လွတ်လပ်စွာ ကူးယူ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။)